Maka: i-imeyili hash | Martech Zone
Maka: i-imeyili hash
I-SkAdNetwork? Ubumfihlo beSandbox? Ngimi nama-MD5s
NgoMsombuluko, Septemba 28, 2020 NgoLwesibili, Septhemba 29, 2020 UDavid Finkelstein
Isimemezelo sika-Apple sikaJuni 2020 sokuthi i-IDFA izoba yisici sokungena kubathengi ngo-Septhemba ukukhishwa kwe-iOS 14 kuzwakale sengathi umbhoxo udonswe ngaphansi kwemboni yezikhangiso eziyizigidi eziyizinkulungwane ezingama-80, uthumela abathengisi emsakazweni ukuthola into engcono kakhulu elandelayo. Sekuphele izinyanga ezingaphezu kwezimbili, futhi sisazinwaya amakhanda. Ngokuhlehliswa kwakamuva okudingeka kakhulu kuze kube u-2021, thina njengemboni sidinga ukusebenzisa lesi sikhathi ngempumelelo ukuthola indinganiso entsha yegolide